Labo alinge abilayo ikati lakho ukwazi ukuthi lesi sinqumo akusimelula. Lena ukucindezeleka hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa isilwane kodwa nezalo aphethe.
Naphezu isithiyo ezingokwengqondo, uma ikati ingeyona lesizwe sabantwana idwala phila yokuphila khulula, kungcono abilayo, kusukela izidingo zokuzala unmet esithathu zingaba yingozi empilweni yakhe.
Nokho, ngemuva kokuhlinzwa akufanele uphumule. Ikati kwaba sisasebenza futhi unempilo, kudingeka ulandele iziqondiso ezithile, ikakhulu ngokuphathelene yokudla yayo.
Namuhla, ngokusho izibalo ezweni lethu inzalo cishe 75% of cats yasekhaya. Nakuba lo msebenzi kuyazuzisa futhi usinika ukubulala isilwane sasekhaya, kodwa lokhu kwenzeka kuphela uma uma izinguquko ezithile eziphathelene ukunikezela futhi wenza ukunamathela esimisweni sabo.
Ukudla for namakati inzalo kufanele libe zemvelo noma imikhiqizo ngokuphakeme ezimbonini kusetshenzwe Ukwakheka efanelekayo. Ukudla kufanele kube eziningi amaminerali. Ngezinye imikhiqizo efanayo, okuhlanganisa magnesium ne phosphorus kumele kuyehla kube sezingeni eliphansi, ngoba wona aholela ukubukeka isifo itshe.
Kuyadingeka ukuba acabangele ukuthi manje isilwane uyothwala yokuphila ingasaphathwa asebenzayo, uzodinga ukudla kancane. Ukudla for namakati inzalo akufanele kube ukuzijabulisa kuphela, ngakho udinga ngaphezulu ukuze baxoxe nazo futhi ukudlala.
Ngezinye izikhathi abanikazi ucophelele ukuthi isitsha cat sika kwakugcwele ukudla. Nokho, ngokwenza kanjalo banayo isilwane "senze", ngoba nalokhu imodi amandla ke maduzane elizobe uyithayiphe ukhuluphele.
Ngakho asikho isidingo njalo ukwengeza kuya isitsha sokudla for namakati inzalo, kodwa amanzi kuhlanzeke futhi kube kusha, kunalokho, kubalulekile ukuba phezulu kakhulu njalo.
amathiphu Specific on umsoco lezi ezifuywayo ubuka encike ngqo kwi lokho akudlayo. Unganikeza njengomngani ukudla zemvelo, futhi ukudla amakati inzalo, edayiswa esitolo.
Uma ikati odla ukudla ezenziwe ekhaya, khona-ke kungenzeka ukunikeza noma yimuphi yenkomo noma inyama yenkukhu, ezihlukahlukene ubisi iphalishi, imikhiqizo yobisi nemifino. Kuyoba usizo kakhulu ukukufaka ekudleni yenkomo kanye inkukhu inhliziyo, isisu, isibindi. ukupha is hhayi Kunconywa ngenxa okuqukethwe eliphezulu phosphorus kanye magnesium izinhlanzi inzalo amakati.
Abanye abanikazi kuthiwa reinsured futhi baqala ukondla amakati ukudla wokwehlisa umzimba kuphela senzelwe ekwelapheni urolithiasis. Nokho, uma isilwane akanayo izimpawu zalesi sifo, ngakho-ke akudingeki ukudla, ngeke kube khona abazuzayo kuso.
Esimweni lapho abanikazi elula ukuthatha ukudla esitolo, ngemuva kokuhlinzwa Kungcono ukuthenga cat ukudla Orage, Premium, Akana. On iphakethe kumele inikezwe ukuthi umkhiqizo kufanelekile izilwane inzalo.
Abanye abakhiqizi manje ukukhiqiza okuphakelayo esikhethekile amakati ukhulelwe, izilwane zinhlobo ezahlukene; kukhona uchungechunge ehlukile kittens, amakati omdala, njll
Kuyadingeka sonke isikhathi ukulawula isisindo ikati. Ungethuki uma emva inkomba ukusebenza yesisindo sayo uzobe kancane anda. Kodwa uma izimpawu ezihambisana nokukhuluphala kumele sithathwe.
Ukuze lithole ukuthi awuzange inzalo khona amakati ukhuluphele, kanje: kubalulekile ukuba ubambe isandla emathangeni futhi ngemuva isilwane. Uma isisindo kuyinto evamile, khona-ke amathambo kuthiwa wazizwa uma uyithinta.
Akunakusetshenziswa abakwazi ukunikeza ukudla cat etafuleni, kungakhathaliseki ke mewed kanjani futhi ayikho ebuzwa. Noma yimuphi okunamafutha, okugazingiwe, ukudla amnandi futhi elungisiwe kungabangela umonakalo ongalungiseki nezinso isibindi sesilwane, ikakhulukazi inzalo.
Ngakho kubalulekile ukwazi ukuthi ukuthayipha cat isisindo Akubalulekile zinciphise isibalo feedings, kungcono ukunciphisa izingxenye.
Ibhulashi Sphynx: incazelo zohlobo kanye nokubuyekeza
Eyikati Remora e aquarium: izinhlobo, indlela ukondla
Okuvame kakhulu abanale nkinga